Lucas Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Home STARS EUROPEAN Lucas Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra fotsiny amin'ny hoe Lucas. Ny tantaran-tantaran'i Lucas Hernandez momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahavariana avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa nilalao anjara lehibe teo amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny Fiadanana 2018 FIFA ho an'i Frantsa izy. Na izany aza, vitsivitsy monja no mihevitra ny Bio Bio Lucas Hernandez izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Lucas Hernandez Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Manomboka eo, ny anarana feno dia Lucas François Bernard Hernández. Teraka tamin'ny andron'ny Fetin'i Valentine i Lucas tamin'ny 14 ny Febroary 1996 tany Marseille, Frantsa. Teraka tamin'ny reniny izy; Py Laurence ary ray, Jean-François Hernández (samy misy sary eo ambany).
Lucas dia avy amin'ny lalaon'ny baolina kitra ary nihalehibe niaraka tamin'i Theo Hernandez zandriny (sary etsy ambany miaraka amin'i Lucas) izay roa taona amin'ny maha-zandriny azy ary ankehitriny dia milalao amin'ny Espaniola goavana, Real Madrid.
Niaraka tamin'ny rahalahiny i Lucas ary nanomboka ny fiainany tany Marseille Frantsa noho ny nilalaovan'ny rainy ny baoliny tao Olympique de Marseille. Rehefa nahita an'i Frantsa firenena tsara kokoa mba hijanona sy tsy te hijanona, dia nijanona niaraka tamin'ny maman-dry zareo tany amin'ny tanindrazany ny ankizilahy roa raha nandao an'i Espana ny dadany rehefa nafindra tany amin'ny klioba espaniola, Compostela.
Rehefa taona 4 i Lucas dia niara-niasa tamin'i Theo sy ny mamanany izy ireo mba hiverina hiaraka amin'i Dada, izay nilalao tamin'ny Athletico Madrid tamin'ny taona farany.
Lucas Hernandez Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -The Separation
Tsy sarotra tamin'i Lucas ny niorina tany Espaina rehefa hitany fa ketraka izy noho ny ray aman-dreniny manana olana ara-panambadiana. Ny olana tao amin'ny fianakavian'i Hernandez dia vokatry ny fiantraikan'ny lavitra amin'ny fanambadiana.
Mahagaga, indray andro, dadan'i Lucas Hernandez, Jef, araka izay fantatry ny namany azy, dia nameno ny kitapony ary nandray ny fiaramanidina hanomboka fiainana vaovao any an-kafa, kilometatra an'arivony avy any Madrid. Nalahelo izy fa navelany ny zava-drehetra, anisan'izany ireo zanany lahy.
Tena zava-tsarotra ho an'i Lucas ny fandinihana ny fisarahan'ny ray aman-dreniny. Amin'ny ankapobeny, ny ankizy rehetra izay niaina nandritra ny fialan-tsasatry ny ray aman-dreny dia hahafantatra tsara ny fanaintainana ara-pihetseham-po lalina izay azony atao. Ho an'i Lucas sy Theo, ny fisintahan'ny ray aman-dreny dia niteraka fiantraikany ara-psikolojika teo amin'izy ireo, ny fivoarana izay nihatra tamin'ny olon-dehibe.
Lucas Hernandez Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Reny manan-janaka
Ny Py Laurence irery dia tsy maintsy nitondra an'i Lucas sy ny rahalahiny, Theo avokoa. Nihalehibe niaraka tamin'ny reniny i Lucas sy ny rahalahiny, izay hita tao amin'ny baolina kitra tamin'ny làlana sarotra. Ny fahabangana dia nifarana rehefa nisy baolina teo an-tongotr'izy ireo ka nahatonga azy ireo (Lucas sy Theo) mahita alokaloka sy Fientanentanana avy amin'ny fisian'ny fisaraham-panambadiana ataon'ny ray aman-dreniny.
Ny tsy fisian'ireo ray aman-drenin'ilay baolina kitra dia tsy nanakana azy tsy ho mpilalao baolina mihitsy. Theo, ilay zandriny indrindra tamin'ireo roa ireo, no voalohany nanintona ny sain'ny Atlético de Madrid ary niangaviana izy handalo fitsapana izay nalehany tamin'ny loko manidina. Lucas (ny lohahevitra amin'ity lahatsoratra ity) dia nahazo ny lanjany tamin'ny baolina kitra tamin'ny taona 11 (sary etsy ambany).
Nanomboka ny football football i Lucas niaraka tamin'i Rayo Majadahonda, ekipa mpilalao baolina kitra Espaniola miorina ao Majadahonda, ao amin'ny vondrom-piarahamonina tsy miankina ao Madrid. Ny fiheverany ny hilalao amin'ny ekipa dia nahatonga ny tsy fahamendrehana tamin'ny reniny izay nanizingizina fa tsy maintsy miara-mipetraka ny zanany roa. Tsy te havelan'i Py Laurence hamela olona iray hipetra-pianakaviana izany, ka tamin'ny farany dia samy nandeha tany Atlético Madrid avokoa ireo tovolahy roa ireo. Nahita fahasambarana tamin'ny mamanay sy ny fianakavian'i Hernández ny nijery ny zanany roa nilalao ho an'i Athletico Madrid.
Lucas Hernandez Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Mitsangàna mba ho ankizilahy
Ny zava-drehetra dia nanomboka nitovitovy tamin'ny rosier sy ny rosier rehefa nandroso nandritra ny taom-pirahalahiana ireo rahalahy roa ary tamin'ny farany dia nanao izany ho fiaramanidina ambony. Raha nahazo ny ekipa voalohany i Lucas, avy amin'i Athletico Madrid, Theo rahalahiny dia nindramina tao amin'ny Deportivo Alavés. Tao amin'ny Deportivo Alavés, Theo (sary etsy ambany) no tsara tarehy (sary etsy ambany) no nalain'ny Real Madrid izay nividy azy tany amin'ny club tao 2017.
Ny lozam-pifamoivoizan'i Theo mankany Real Real dia nahatonga ny fiahiany ny maman-dry zareo satria hitany fa nihalehibe ny ankizilahy mba hikarakarana ny tenany, na dia lavitra azy ireo aza. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny renim-pianakaviana iray dia nirehareha tamin'ireo zanany lahy raha nilalao ho an'ireo klioba lehibe ao Madrid izy ireo.
Raha nandeha tany amin'ny Real Madrid ny zandriny lahy, dia nanapa-kevitra i Lucas fa hiasa mafy mba hametraka ny toerany amin'ny fiarovan-dohan'ny Athletico Madrid izay nandeha tsara araka izay azony natao sy nafindra toerana Filipe Luis. Nahazo aina tamin'ny baolina frantsay teo an-tongotr'i Lucas izy, nahasosotra sy nahatsikaritra ary nanintona azy Didier Deschamps izay tsy miantso an'i Lucas ho an'ny ekipa Frantsay ihany fa nampiditra azy ao amin'ny lisitry ny World Cup 2018. Nanafika ireo mpanohana baolina kitra mba hahitan'i Lucas ho lasa mpitarika maharitra ho an'i Frantsa ary mpikambana iray tena manan-danja amin'ny fahombiazan'ny ekipa amin'ny fifaninanana World Cup FIFA 2018. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Lucas Hernandez Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy lehibe rehetra, misy vehivavy tsara, na izany no fitenenana. Ary ao ambadiky ny mpilalao baolina kitra Frantsay rehetra, misy vehivavy na vehivavy sipa mahafinaritra.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, Lucas dia manambady amin'i Amelia Ossa Llorente izay namaritra ny fihaonany tamin'ny mpilalao baolina voalohany amin'ny teny manaraka;
"Nihaona tamin'i Lucas tany Madrid aho ary fitiavako voalohany. Nianatra aho taorian'ny roa volana fa mpilalao baolina kitra izy ary te hiala aho satria tsapako fa misy mpilalao baolina manana fiainana feno sy manana mpankafy maro. Taty aoriana dia nanaraka ny foko aho ary nanohy ny fifandraisana ".
Lucas Hernandez Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Fifandraisana fifandraisana
Talohan'ny fanambadian'izy ireo, Lucas sy Amelia Ossa Llorente dia tafiditra tao anatin'ny tranga iray izay niafara tamin'izy roa lahy niseho tao amin'ny fitsarana.
Tamin'ny 3rd of February 2017 tao amin'ny 2: 30 am, Lucas dia nosamborin'ny polisy Espaniola noho ny ahiahiny tamin'ny fanoherany ny sipany izay nibata ny fifampitifirana ary naratra nandritra ny fifandonana. Nameno didim-pitsarana tamin'ny lehilahy i Amelia. Talohan'ny nisehoany tao amin'ny fitsarana, i Lucas sy i Amelia Ossa Llorente dia samy notsaboina teo amin'ny sehatra noho ny fanimbana notohanana nandritra ny ady.
Ny mpitsara dia nametraka didy amam-pitsipika ho azy ireo, ankoatra ny andro 31 ho an'ny serivisy. Fotoan-tsarotra mampivarahontsana izay notaterin'ny gazety.
Nipoitra ilay loza Diego Simeoneny fihaonamben'ny gazety izay nametraka sary ratsy ho an'ny cub.
"Raha ny marina, tsy manana fampahalalana ofisialy momba ny zava-nitranga aho,"
Diego Simeone hoy izy.
"Noho izany dia tsy afaka miresaka momba ny zavatra tsy fantatro akory aho. Namaky zavatra izahay, ary nahare zavatra, fampahalalam-baovao izay tsy ofisialy no niely. Izany no zava-misy iainantsika. Tsy afaka milaza intsony aho. "
Lucas Hernandez Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Misimisy kokoa
Ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia olana goavana izay tsy maintsy raisina ao Espana. Ny famerenana ny lamandy nomena an'i Lucas Hernandez dia nahitana fampitandremana momba ny mety ho fanagadrana am-ponja 1 taona raha misy ny fanitsakitsahana. Ny tsara indrindra dia samy nandidy an'i both Lucas sy i Amelia Ossa ny fitsarana Espana mba hijanona amin'ny 500meters farafaharatsiny, ao anatin'ny fe-potoana 6 volana. Izany dia nitranga taorian'ny nanamelohana azy ireo tamin'ny andro iraisam-pirenen'ny 31.
Mahagaga fa samy nandika ny didim-pitsarana ny roa tonta satria tratran'ny fianarana maro.
Taty aoriana tamin'io taona io ihany tamin'ny volana jona, nosamborina ireo mpivady nahita ny olona tiany any amin'ny seranam-piaramanidina Madrid niverina avy amin'ny fialantsasatra. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra ny fitsarana. Nosamborina i Hernandez ary nandany ora vitsivitsy tany am-ponja.
Raha mbola tany am-ponja izy dia tsy nosamborina ny ankizivavy niarahany satria tsy nalamina ara-dalàna ny didim-pitsarany.
Na dia voarara aza tsy hiditra ao anatiny Metatra 500 nifanitsakitsaka sy nandika ny didim-pitsarana mihitsy aza, nanapa-kevitra ny handao an'i Espaina mba hanambady any Las Vegas ny mpivady.
Araka ny nambaran'ny mpampanoa lalàna iray ao Madrid, i Lucas dia mety hiatrika fanagadrana am-ponja vonjimaika iray taona noho ny tsy fanarahany ny baiko hanalavirana ny sipany. Soa ihany ho an'i Lucas, dia navotsotra noho ny fiampangany izy satria ampahany amin'ny lalàna Espaniola no nankasitraka azy. Raha araka ny lalàna Espaniola, raha tsy misy ny heloka bevava ny voampanga, matetika ny sazy mihantona mandritra ny roa taona. Nanjary olona afaka i Lucas Hernandez ary niaina tamim-pifaliana niaraka tamin'ny vadiny vaovao. Samy nandeha tany Bahamas ry zareo mba hankalaza ny volan-tantely.
Lucas Hernandez Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Nanamarika azy tao amin'ny ekipam-pirenena frantsay namaly ny anarany "Lucas Hernandez" tsy miantso olona avy any Frantsa. Noho izany ny fanontaniana malaza dia; Inona ny firenen'i Lucas Hernandez? Ny fianakavian'i Lucas Hernandez dia fanta-daza Espaniola noho ny rainy Jean-François, mpilalao baolina taloha teo aloha izay nilalao tao Athletico Madrid ary nisintaka tao amin'ny 2002.
Ny fifandraisana amin'ny Rahalahy: Theo Hernandez koa dia manana ny anjarany momba ny olana momba ny fifandraisana izay mahatonga ny fianakavian'i Hernández ho indray eo amin'ny mason'ny tafio-drivotra. Ao amin'ny script ho an'ny fizarana farany, Theo (sary etsy ambany) dia voampanga ho nanafika ny sipany tamin'ny mariazy tany Marbella, Espana.
Vao volana vitsivitsy monja taorian 'ny zokiny lahy Lucas, dia nandray anjara tamin' ny zava-nitranga tamin 'ilay sipany niaraka tamin' ny sipany sy ny vadiny.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-piainan'i Lucas Hernandez momba ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaona tsy hita isa. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Corentin Tolisso tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa